महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक
२०७१ श्रावण २६, सोमबार ०३:१० गते
अहिले जागिर खाएरै घर चलाउनु पर्ने समय आएको छ । पहिला पुरूषहरु जागिरे, महिलाहरु घरै बसेर कृषि कर्म गर्दथे । सम्पूर्ण चीज खेतबारीबाटै प्राप्त हुन्थ्यो र घर सजिलै चल्दथ्यो । अहिले दुवै जनाले जागिर खाएर पनि घरखर्च चल्न नसक्ने भएको छ । एक जनाको नोकरीले घर चल्न नसकेर दिक्दार हुँदा महिला पनि पढेलेखेकी हुनाले कुनै काम गरेर केही आम्दानी गरौँ भनी सोच्दछन् । कुनै काम नभए पनि घरको साना–मसिना काम त भइनै रहन्छ । ती काम पैसा आउने काम भने हुँदैनन् । त्यसैले, घरमा बिहानको काम भ्याएर दिनभरि कुनै नोकरीमा जाने र बेलुका घरकै काममा व्यस्त रहँदा घरमा काम गर्ने मानिसको पैसा पनि बच्ने अनि आफ्नो आम्दानीले घरखर्च चलेपछि सजिलो हुने हुँदा दिनको समयमा नोकरी खोज्दछन् । हामीकहाँ सानातिना काम महिलाले गर्ने र ठूलाठूला काम पुरूषले गर्ने भन्ने छ । महिला सानासाना घरायसी खर्चले दिक्क भएर कति माग्ने, सधैँ मागेको भनी आफूले पनि केही गर्न पाए हुन्थ्यो भनी काम खोज्दछन् ।
महिला सृष्टिकर्ता हुन् । सृष्टि गरेकालाई स्याहारसुसार गरेर बलियो बनाउने पनि उनकै जिम्मा हुन्छ । त्यसैले, महिलालाई नोकरीमा राख्दा विवाह गर्दिन या विवाह गरे पनि बच्चा पाउँदिन भनी सर्त राख्नेले मात्र नोकरी गर्न पाउने सुनिँदै आएको छ । प्रकृतिले दिएको आमा बन्ने अधिकार नै छुटाएर नोकरी गर्नभन्दा हिजो महिलाले गर्दै आएको घरायसी काम नै ठीक रहेछ भन्नुपर्ने भएको छ ।
हामी बिहान र साँझ खेतबारी, गोठ, कटेरामा हुन्थ्यौँ भने दिनमा शिक्षक हुन्थ्यौँ । सामूहिक परिवार थियो । सबैले आ–आफ्नो ठाउँको जिम्मेवारी निभाइन्थ्यो । मैले करिब दिनमा १९ घन्टा काम गरेँ । बिहान ५ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म काम गरियो । केही समय भात, खाजा खानमा छुट्याउँदा पनि १८ घन्टा कामको कति ज्याला हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा छैन । कृषि, पशुपालन गरेर नै घरखर्च चलेको थियो । तर, त्यसलाई आर्थिक रुपमा नहेरी घरायसी काम भनिन्छ र महिला अनि पुरूषमा विभेद गरिन्छ । आजभोलि दूषित खाना खाएर मानिसहरु रोगी भएका छन् । जन्म दिने आमा नोकरीमा जाँदा रेडिमेड खाना खुवाउनुप¥यो, औषधि गर्दा–गर्दा हैरान । घरमा नै आयआर्जन हुने कामको सीप सिकेर सामूहिक रुपमा व्यापार बढाउन सक्ने हो भने बालबच्चाको पनि स्याहार हुने र नगद आर्जन पनि हुने हुन्छ । महिलाहरुले अन्त नोकरी गर्न जानुभन्दा आफ्नै घरमा आयआर्जन हुने काम गर्न सक्यौँ भने कसैलाई बिन्ती गरेर नोकरी माग्नुपर्दैन ।
विद्यालय, क्याम्पस, सरकारी कर्मचारीहरु महिला नभए कस्तो हुन्थ्यो होला आज ! आजभोलि महिलाहरु मिलेर सहकारी बनाएका छन् । बचत गर्नको लागि सहकारी बनाएर महिलालाई काम दिएका
छन् । बिहान–साँझ घरको काम गरेर दिनमा दैनिकी उठाउन हिँड्छन् । एक जना सदस्य बनाएर बोनस पाउँछन् । पाँच सय सदस्य भएको ठाउँमा पुग्दा १५,००० पाउने रहेछन् । बोर्डिङ वा मन्टेश्वरीमा काम गर्दा मासिक ६–७ हजार पाउँछन् । कुन दिन जागिरबाट निकाल्ने हो, पत्तै हुँदैन । अझ, सञ्चयकोष उपादान स्वास्थ्य बिमाको त कुरै भएन ।
हामीकहाँ विवाहलाई मह¤व दिएर बच्चा जन्माउँछन् । जन्मेका बच्चा सरकारले हाम्रो हो भनी तिनीहरुलाई लालनपालनमा सहयोग गर्न सकेको छैन । बच्चाको मह¤व नै थाहा छैन । विकसित मुलुकमा बच्चा जन्माउने फुर्सद नै निकाल्न गाह्रो छ । कोही गर्भवती भएमा जिम्मा राज्यले लिन्छ, नोकरी गर्ने महिलालाई प्रशासनले सहुलियत दिन्छ । ६ महिनासम्म तलबी सुत्केरी बिदा र ४ महिना बेतलबी बिदा दिन्छ । स्वास्थ्य उपचार पनि निःशुल्क छ । बच्चा जन्माउन चाहनेलाई निरूत्साही पारिँदैन ।
नेपाली जीवन पनि आज ज्यादै व्यस्त बन्दैछ । हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले एक दर्जन बच्चा जन्माए । हाम्रो पालामा तीन सन्तानको समय थियो, अहिले दुई सन्तानको समय
छ । महँगी बढेकाले एक सन्तानभन्दा नपाउने भन्दैछन् । नोकरीमा प्रवेश गर्नै नपाउने हो भने पनि सन्तान जन्माएपछि भोको पेट त भर्नैप¥यो भन्ने दिन आउँदै छ । सन्तान थोरै भए दिनहुँ १५०० ले देश छाड्नु पनि पर्दैन । धेरै सन्तान पाउने देशबाट मानिस कामका लागि ल्याउनु पर्नेछ ।
आजभोलि जापान, बेलायत, अस्ट्रेलियामा बूढाबूढी मात्र देखिन्छन् ! केटाकेटी नै नजन्माउन प्रोत्साहित गरेर सबै सुविधा दिएर राख्छन् ! नेपालमा नोकरी गर्नुपर्दा बालबच्चा जन्माउन नखोज्ने भएपछि जुन देशले बालबच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्दछ, त्यही देश जान खोज्ने नै छन् । सुनेकी थिएँ, मुस्लिमहरु परिवार नियोजन गर्दैनन्, त्यसैले धेरै बच्चा जन्माउँछन् । बच्चालाई दिने राहतमा सबै परिवार पालिन्छन्, अस्ट्रेलियामा ।
हाम्रो कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि नै महिलाको रोजगार हो । त्यसैलाई आयआर्जनमा परिणत गर्न सके सबै रोजगार हुनेछौँ । उठ्नेबित्तिकै भान्छाको काममा जाने, अराउने गर्दा १२ घन्टा जान्छ । कतै पाए पनि तलब ६००० मात्र हो, अरु कुनै सुविधा छैन । आफ्नै घरमा काम गर्न सके १५,००० कमाउन सकिन्छ ।
एउटा धेरै दूध दिने गाई पाल्दा मासिक ३० हजार आउँछ । दूध, घिउ, दही ताजा खान पाइन्छ । एउटा खसीको मूल्य बीस हजार हुन्छ, पाँचवटा खसीको एक लाख हुन्छ । घरमा आफ्नै बारीको तरकारी खान पाइन्छ, किन्न र विषादी हालेको खानु परेन । दिनमै सय, दुई सय रूपैयाँ बच्छ । आफ्नै बारीको धान, मकै, गउँले खान पुग्छ । कुहिएको चामल किनेर कहिल्यै खानै परेन । गाई, बाख्राका लागि आधा खर्च घटाउँदा पनि मासिक हामी तीस हजार कमाउँछौँ ।
यस्ता किसिमका बहस मैले ठाउँठाउँमा गर्दा तपाईंको उमेरकालाई कृषिको मह¤व थाहा थियो र अहिले त्यसो भन्नुहुन्छ । अहिले घाम, पानी, गोबरमा कति काम गर्ने भन्ने जवाफ पाउँछु । बरू आधा पेट, विषादी राखेको तरकारी खाई सहरमा नै बस्ने हो । सधैँ अभाव र दबाबमै भए पनि बाँच्ने हो, त्यसैले सबै खुसी नै हुन्छन् भन्ने धेरै पुरूषहरु छन् ।
महिलाहरु पढेलेखेका धेरै भैसकेका छन् । उनीहरुको सोच कृषिमा जाने हो भने वैज्ञानिक तरिकाले खेती गर्न सकिन्छ । आजभोलि डाक्टर, इन्जिनियर पढेकाहरु कृषि, पशुपालन, कुखुरापालनमा लागेका छन् भन्ने एक भाइले मलाई सुनाए । शारीरिक रुपमा तन्दुरूस्त हुन पाइने, ताजा खान पाइने, कसैको दबाबमा बस्न नपर्ने, आफ्नै घरमा छोराछोरीको स्याहारसुसार गरेर बस्न सकिने र मासिक रुपमा पनि प्रशस्त कमाइ हुने कृषि पेसामा नै हो भनी एउटा भाइले एक–एक हिसाब गरेर बताए । मैले लेखको माध्यमबाट ५–६ हजारमा करिब १२ घन्टा समय काम गर्ने महिलालाई पु¥याउन खोजेकी छु । अहिले गाउँगाउँमा विभिन्न संघसंस्थाले तालिम दिई सीप सिकाएको छ । त्यही सीपलाई आयआर्जन हुने बाटो बनाए पनि जीवननिर्वाह गर्न गाह्रो पर्दैन ।
एउटा सानो पसल गर्दा त्यहाँ एक लाखमात्र खर्च हुन्छ तर आम्दानी राम्रो हुन्छ । घरभाडा दिएर महिनाको बीस हजार बच्छ भने अर्काकोमा काम गर्न जाने होइन । उनीहरुले दिने त्यही ६–७ हजार त हो नि, त्यसैले हरेक दिदीबैनीहरु काम खोज्दै नहिँडौँ । अब आफ्नै घरमा बसेर आयआर्जनको काम गरौँ । मैनबत्ती बनाउने, सिलाउने, चाउमिन बनाउने, च्याउखेती गर्ने धूप बनाउने, पोते उन्ने, खेलौना बनाउने, जुत्ता बनाउनेजस्ता सीप सिकाइ राखिएको छ । त्यही सिकेर आयआर्जन गर्नुहोस् । ६–७ हजार रूपैयाँको जागिर खान पाइएन भनेर गुनासो नगर्नुहोस् । ६–७ हजारको नोकरी गर्न तपाईं कति घन्टा खट्नुहुन्छ, हिसाब गर्नुभएकै होला ।
एउटा बैनीलाई घरमा काम गर्न बोलाएको त उनी दस बजे आएर चार बजे गइन् । उनले ६ सय रूपैयाँ मागिन् । त्यस हिसाबले घन्टाको १०० रूपैयाँ भयो । अब आफैँ हिसाब गर्नुहोस्, तपाईंलाई कति घन्टा काम लगाएर कति दिइएको छ ? यहाँभन्दा बढी भन्नुपर्ने जरूरत छैन, तपाईं आफैँ जानकार हुनुहुन्छ ।
त्याग र भोगका कुरा (लक्ष्मणरेखा)
गैँडालाई चरनको अभाव
योगमा सूर्य नमस्कार आसनको महत्त्व
सवारी दुर्घटनामा तीनको मृत्यु, १० जना घाइते
इनरुवा । सुनसरीको दुहबी नगरपालिका–१० स्थित भित्री सडकमा मंगलबार माइक्रो र मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने...
प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने जिकिर
वडा स्तरमा हुने प्रदर्शनका लागि काँग्रेस चितवनले तोक्यो प्रतिनिधि